Abiy Axmed oo Muuse Biixi kala hadlay xiriirka uu la yeelanayo DFS
ADDIS ABABA - Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya, Dr Abiy Axmed ayaa xafiiskiisa magaalada caasimada ah ee Addis Ababa ku qaabilay madaxwaynaha maamulka Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi heer wasiiro ah oo uu horkacayo.
Labada dhinac ayaa kawada hadlay iskuna afgartay arrimo badan oo muhiim ah, kuwaasi oo ay ku jiraan xiriirka labadda shacab, xaqiijinta badqabka Itoobiyaanka ku nool Somaliland iyo wadashaqehnta dhow oo amniga iyo nabada ah.
Abiy iyo Biixi ayaa isla soo qaaday cilaaqaadka uu maamulka Hargeysa la yeelanayo dowlada dhexe ee Soomaaliya, kaasi oo waqti xaadirkaan aanu wanagsaneen, inkasta oo ay socdaan dadaalo lagu hagaajinayo.
Hogaamiyaha Somaliland ayaa bogaadiyay isku-deyada Abiy ee ku wajahan isdhexgalka gobolka, isaga oo ogolaaday dalab ku aadan in uu xoojiyo wadasheyn dhow oo uu maamulkiisu la yeesho dowlada dhexe ee Soomaaliya.
"Iyada oo taasi laga duulayo, waxay ku heshiiyeen in laga wadashaqeeyo kulamo fool ka fool ah oo ay yeeshaan [Somalia iyo Somaliland] mustaqbalka," ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska Abiy Axmed.
Gabagabada wadahadalkooda, labada masuul ayaa xoojiyay ahmiyadda ay leedahay isticmaalka dekada iyo cilaaqaad dhaqaale oo ay yeeshaan, sida ku cad bayaanka kasoo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia.
Waa markii ugu horeysay oo uu tago Muuse Biixi wadanka Itoobiya tan iyo markii uu xafiiska la wareegay Abiy bishii April ee sanadkii hore 2018, iyada oo wixii markaasi ka dambeeyay la sheegay in uu hoos-u-dhacay xiriirka Ethiopia iyo Somaliland.
Itoobiya ayaa kamid ah wadamada dariska la ah Soomaaliya kuwaasi oo xiriir ganacsi oo ay faa’ido ku qabaan la leh Somaliland, oo sheegata in ay ka madax banaan tahay JFS tan iyo 1991-dii, wallow aan ictaraaf helin.
Maxaa ka jira in Qalbi Dhagax la siiyay Baasaboor diblumaasi ah?
Afrika 29.09.2018. 11:14
Hogaamiyahan oo dhawaan laga soo daayay Xabsiga ayaa booqasho ku jooga Somaliland...
Abiy Axmed iyo Xaaskiisa oo loo ogolaadey inay korsadaan canug aysan dhalin
Afrika 03.02.2019. 00:03
Eritrea oo beenisay in Ciidamo usoo dirayso Soomaaliya
Soomaliya 29.12.2018. 10:04
Qodobo muhiim ah oo looga hadlay kulankii 1aad ee Wasiirada DDSI
Afrika 03.09.2018. 23:46
War Saxaafaded 22.06.2018. 02:28
Muxuu salka ku hayaa socdaalka Madaxweynaha France ee Ethiopia?
Afrika 12.03.2019. 16:41
ONLF oo qorshe cusub ka fulinaysa Jigjiga iyo mas'uul ka hadlay
Afrika 02.12.2018. 09:22
Qarax ka dhex-dhacay Masjid oo lagu dilay dad uu Imaamka ku jiro 24.05.2019. 17:25
Farmaajo oo ka qeybgalaya caleemo-saarka madaxweynaha Koonfur Afrika 24.05.2019. 15:34
Theresa May oo iska casileysa xilka ra'iisul wasaaraha Ingiriiska 24.05.2019. 12:20
Farmaajo oo eryay mas'uul ka tirsan G/Banaadir, bedelkiisna magacaabay 24.05.2019. 03:07
Is-qarxihii lagu qabtay bartamaha Soomaaliya oo wajahaya maxkamad 24.05.2019. 01:30
Farmaajo oo amar dul-dhigay taliska ciidamada Asluubta Soomaaliya 24.05.2019. 01:16